मेरो उम्मेदवार उद्योगी व्यवसायीहरुको चाहना हो - Awajonline Online Newspaper
मेरो उम्मेदवार उद्योगी व्यवसायीहरुको चाहना हो
दोलखा उद्योग वाणिज्य संघको अधिवेशनको तयारी कहाँ पुग्यो ?
साधारण सभा अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । साना तिना व्यवस्थापनका काम बाँकी छ ति पनि संघको टिम लागेर सञ्चालन गरिरहेका छौं केही दिनमा सबै सकिन्छ । कार्यक्रमलाई सहज, आकर्षक र प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न उपसमितहरु गठन गरेका छौं ।
तीन कार्यकाल अध्यक्ष चलाई सकेपछि किन पुनः उम्मेद्वारी दिनु भयो ?
मेरो उम्मेद्वारी मेरो व्यक्तिगत चाहनाभन्दा पनि सम्पूर्ण दोलखाली उद्योगी व्यवसायी, सरोकारवालाहरु र शुभचिन्तकहरुको चाहना हो । विगत १० वर्षदेखि हामी उद्योगी व्यवसायीहरुसँग नजिक छु । हाम्रो कार्यकालमा स्थानीय, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थासँगको सहकार्यमा भइरहेका साना मझौंला तथा ठूला दोलखाली गौरवशाली योजनाहरु अधुरो भएका छन् । बिनासकारी भुकम्प २०७२ र नाकाबन्दीले गर्दा दोलखा भित्रका उद्योगी व्यवसायी, आम उपभोक्ताहरुका धेरै समस्याहरु छन् । ति समस्याको समाधान पनि गर्नु छ । मैले भएका पदाधिकारी मध्येबाट एक जनालाई सर्वसम्मती गरेर जाऔं पनि भनेको तर एक जना नमानेर चुनावमै गएपछि हाम्रो प्यानलबाट मलाई नै सबैको अनुरोध आएपछि मैले अस्वीकार गर्न समिन त्यसैले म पुनः अध्यक्षको उम्मेद्वार भएको छु ।
नेतृत्वमा सँधै एकै अनुहार मात्र भन्ने पनि छ नि ? तपाईका चुनाव जित्ने आधारहरु के छन् ?
निर्वाचन एउटा प्रक्रिया मात्र हो । हाम्रो जित सुनिश्चित छ । हाम्रो सानो प्रयाुसले दोलखा जिल्लाका २ नगरपालिका र ४८ गाविसका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई भुकम्पपछि तत्काल उद्धार, राहत संकलन र वितरणमा सबै व्यवसायी र उपभोक्ता माझ पुग्यौं । सबैभन्दा ठूलो हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरुकै विश्वास हो । व्यवसायीलाई आइपर्ने आगलागी, बाढीपहिरो जस्ता विपत्का बेला पनि तत्काल समस्याको समाधान गरी व्यवसायीको मन जित्न सफल भएका छौं । हामी कहिल्यै पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेनौं
तपाईको ३ पटकको नेतृत्वमा महत्वपूर्ण काम के के गर्नु भयो ?
मूख्य कुरो त मैले जिल्लाका तमाम व्यवसायीहरुको मन जित्न सफल भएँ । सीमित आय श्रोत र धेरै चुनौतिको बाबजुद पनि हाम्रो कार्यकालमा उद्योग वाणिज्य संघ लाई “घ” वर्ग बाट “क ”वर्गमा वर्गीकृत गर्न सफल भयौं । देशमै पहिलो पटक कोसेली घर सञ्चालन ग¥यौं । अहिले ५ वटा कोसेली घर सञ्चालनमा छन् । एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम मार्फत नेपाली कागजका उत्पादनलाई विविधिकरण गरेका छौं । हिमाली कार्यक्रमबाट साना तथा ठूला उद्योग व्यवसाय, ३ सय ९७ वटा उद्योग दर्ता भई २३० वटा मूल्याङ्कन गर्दा ९६ वटा उद्योग समझौता भई १३ करोड अनुदान प्राप्त गरिसकेका छन् । चरिकोट बजारको सडक विस्तार गरेर सबैलाई सुविधा पुगेको छ । साझेदारीमा सिटी हल निर्माणाधिन छ । भुकम्पले विस्थापित हुन लागेको सिंगटी बजार हाम्रै पहलमा तटबन्द गरी सुरक्षित बनाउने काम सुरु भएको छ । जिरीमा स्थानीयबासीको सहयोगमा जग्गा प्राप्त गरी एक करोड बराबरको आफ्नै भवन बनेको छ । मागादेउरालीमा उद्योग स्थापना भएको छ । पुरानो कार्यसमितिको १९ लाख थियो सबै चुक्ता गरी सुविधासम्पन्न भवन बनाएका थियौं तर त्यो भुकम्पले क्षति बनायो । त्यो पनि पुर्ननिर्माणका लागि लागेका छौं । हामीले देश विदेशका अनुभवहरु प्राप्त गरेका छौं ।
तपाई संघलाई राम्रो बनाउँन भावी योजना के के छन् ?
आफ्नो भुकम्पले क्षतिग्रस्त भवन पुर्ननिर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने, क्षतिग्रस्त उद्योग, कोसेली घर र व्यवसायको पुर्ननिर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने, सिंगटी, मागादेउराली र मैनापोखरी शाखाको आफ्नै भवन बनाउन पहल गर्ने, जिरी शाखालाई नगर उद्योग वाणिज्य संघमा स्थापित गराउन पहल गर्ने, व्यवसायी बढ्दै गएकाले तामाकोसी, किर्ने, भैंसे, कालिञ्चोक, गोंगर लगायतका बजारउन्मुख ठाउँहरुमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, एक गाउँ एक उत्पादनको सफलतापछि दोलखाको मौलिक उत्पादन भेगीय हिसावमा एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । हिमाली आयोजनामा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा रहेको १ सय ६७ उद्योगको छनौटका लागि पहल गर्ने, कर, पान, भ्याट र उद्योमशिलता सम्बन्धि तालिम सञ्चालन गर्ने, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति जिल्लामै उत्पादन गर्ने,भुकम्प पीडित व्यवसायीहरुलाई ऋणको व्याज मिनाहा र हालसम्म पनि धेरै व्यवसायीले बीमा नपाएको अवस्थामा छिटोछरितो बीमा प्राप्त गर्न पहल गर्ने, व्यवसायीक केन्द्रहरुमा आधुनिक प्रविधिमार्फत सेवा लिन पहल गर्ने र सबै बजार क्षेत्रमा नियमित सडक बत्ती व्यवस्थापनका लागि पहल गन, केबुलकार, जलविद्युत आयोजना लगायतका ठूला उद्योग स्थापना गरी रोजगारी वृद्धिका लागि पहल गर्ने, व्यवसायिक कल्याणकारी कोष वृद्धि गरी राहत बढाउने, वैज्ञानिक घरभाडादर निर्धारण गर्ने लगायतका योजना रहेका छन् ।